Askari ka tirsan Ciidammada Uganda oo Askar kale ku dilay xarunta Xalane | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Askari ka tirsan Ciidammada Uganda oo Askar kale ku dilay xarunta Xalane
Askari ka tirsan Ciidammada Uganda oo Askar kale ku dilay xarunta Xalane
Askarti ka tirsan ciidanka Uganda ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa saddex askari ku dilay Sabtidii gudaha xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidanka AMISOM.
Askariga toogashadan geystay ayaa waxa uu muran kala dhexeeyay Kormeerihiisa, kaasoo ay shaqo isku qabteen, taasoo markii dambe keentay inuu goobta ka dhaco gacan ka hadal iyo rasaas. Wararka la helayo waxa ay sheegayaan in goobta lagu dilay Kormeeraha iyo labada askari ee ilaalada u aheyd, halka markii danbena uu gacantiisa isku dilay askariga Uganda u dhashay ee falka toogashada ah geystay.
Afhayeenka Ciidanka Difaaca waddanka Uganda ,Brig Richard Karemire oo dhacdadan xaqiijiyay ayaa sheegay inay baaritaan ku billaabeen kiiskan la yaabka leh oo ah noocii u horreyay ee laga soo sheego ciidanka AMISOM.
Wali lama soo bandhigin magacyada askarka ku dhimatay xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho, balse ma aha arrintan mid ku cusub ciidammada Uganda ,iyadoo kiisas badan oo noocan ah ay ka dheceen dalka Uganda , waxaana ciidanka Uganda ay isku dilaan inta badan arrimo ay xitaa ku jiraan haween ay isku haystaan, xiriir jacayl oo xumaday iyo arrimo kale.
Sannadkii 2016, Isaac Obua ayaa dugsi tababbar ciidan ku dilay toddobo kale oo ardayda ka mid ah, sannadkii 2018kii Pte Newton Okello ayaa isna waxaa lagu xukumay 80 sanno oo xarig ah kaddib markii uu diley haweenay xaamilo ahayd.
Askari ka tirsan guutada toddobaad ayaa dilay sannadkii 2013kii gabar ay saaxib ahaayeen kaddib markii ay murmeen, isla sannadkaasi Pte Patrick Odoch ayaa 90 sanno lagu xukumay, markii uu laayay 11 qof oo rayid ah.
Hebret Rwakihembo oo ka tirsanaa ciidammada Booliska Uganda ayaa sannadkii 2012kii khaarajiyay xaaskiisa iyo dad kale.
Previous article(Sawirro) Deni oo arin lama filaan ah u Sameeyay Lafta gareen iyo Waare
Next articleBeesha Caalamka oo Kenya kula shiraysa Madaxda Maamula Goboleedyada